Valiny haingana: Mety ve ny rano voadio ho an'ny trondro Betta - BikeHike
Home » Miscellaneous » Valiny haingana: Mety ve ny rano voadio ho an'ny trondro Betta
Inona no rano ampiasainao amin'ny trondro betta?
Mety ve ny mampiasa rano voadio ao anaty fitoeran-trondro?
Ahoana no fanaovana rano betta trondro?
Afaka mampiasa rano anaty tavoahangy ve aho ho an'ny betta?
Azo antoka ve ny pH 7.6 ho an'ny Bettas?
Inona no karazana rano tokony hampiasainao amin'ny fitoeran-trondro?
Tsara kokoa ve ny rano voadio na voadio?
Misy chlorine ve ny rano voadio?
Tian'i Bettas ve ny rano mafy?
Impiry ianao no tokony hanova rano Betta?
Tian'i Bettas ve ny Blackwater?
Ahoana no hanaovanao ny rano amin'ny paompy ho an'ny trondro?
Afaka mametraka trondro betta amin'ny rano paompy tsy misy conditioner ve ianao?
Mila sira ao anaty ranony ve ny bettas?
Mila sivana ve i Bettas?
Ahoana no hampidina ny pH amin'ny trondro betta?
Inona no pH tian'ny bettas?
Ny rano tsara indrindra ampidirina amin'ny tankinao dia ny rano amin'ny paompy, raha mbola misy fepetra aloha. Raha tsy izany dia tokony hiezaka mampiasa rano loharano ianao. Tokony hialanao foana ny rano voadio na voadio, satria tsy ampy ny mineraly sy ny otrikaina ilaina ilain'ny betta anao mba hivelomana. Matetika dia mahasoa ny mampiasa additive palitao stress.
Ny trondro Betta dia hiroborobo ao anaty rano misy pH "tsy neutre" manodidina ny 7.0. Ny ankamaroan'ny pH rano paompy dia hianjera ao anatin'ny 6.5 hatramin'ny 7.5. Mora ny manitsy ny maripana mivantana avy ao amin'ny faucet mankany amin'ny faritra tsara indrindra ho an'ny trondronao.
Tsy tokony hampiasa rano voadio ianao amin'ny fiovan'ny rano ao anaty fitoeran-trondro. Ny antony mahatonga izany dia ny tsy fahampian'ny mineraly amin'ny rano voadio. Ny trondro sy ny zavamaniry dia samy mampiasa mineraly ao anaty rano, izay ahafahan'ny olombelona mahazo izay ilainy avy amin'ny sakafo. Tsy vitan’izay fa ny mineraly ihany koa no handamina sy hanitsy ny haavon’ny pH ao anaty rano.
Dingana 1: Atombohy amin'ny kaontenera 1 galona misy rano fisotro. Dingana 1: Ampio NovAqua Plus 2 mitete isaky ny rano galona. Dingana 2: Asio sotro dite 3/1 ny sira Aquarium isaky ny rano galona. Dingana 2: Ampio 4 mitete ny Aquari-Sol isaky ny galona rano. Dingana 1: Fenoy rano paompy ny sisa tavela amin'ny kaontenera. Dingana 5: Credit fanampiny:.
Ny rano amin'ny tavoahangy dia safidy lafo kokoa amin'ny rano paompy, fa tsy toy ny rano voadio, dia tsy voahodina mba hanesorana ireo mineraly sy otrikaina. Ity rano ity dia tsy hisy chlore ao anatiny koa, noho izany dia azo antoka ny fampiasana amin'ny tank betta raha toa ka mifanaraka amin'ny haavon'ny betta azo antoka ny haavon'ny pH.
Ny trondro Betta dia tsara indrindra amin'ny pH tsy miandany amin'ny 7.0 saingy afaka mandefitra eo anelanelan'ny 6.5-7.0.
Ny rano amin'ny paompy mahazatra dia mety amin'ny famenoana ny aquarium raha mbola avelanao hipetraka mandritra ny andro maromaro alohan'ny hampidirana trondro (ny chlorine ao amin'ny rano paompy dia hamono ny trondro). Azonao atao ihany koa ny mividy vahaolana dechlorination ao amin'ny fivarotanay.
Ny rano voadio dia safidy tsara matetika satria ny fanadiovana dia manala ireo akora simika sy loto ao anaty rano. Tsy tokony hisotro rano voadio ianao satria tsy misy mineraly voajanahary, anisan'izany ny calcium sy magnesium, izay mahasoa ny fahasalamana.
Misy chlorine ve ny rano voadio? Raha tsorina dia TSIA! Ny rano voadio Durastill dia TSY misy chlorine. Saingy tsy afaka manala sy manivana ny chlorine ny distillation rano ambany kalitao.
Raha sahirana amin'ny fitazonana ireo haavon'ny tanko ireo ianao noho ny loharanon-drano ampiasaina, dia mety ho tsara kokoa ny mivadika amin'ny rano distilled na osmosis mba hifehezana bebe kokoa ireo fari-piainana ireo.
Saingy ny dikan-teny fohy dia ny fiovan'ny rano kely 10-20% indray mandeha isaky ny 7-10 andro dia tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny betta anao. Izany koa dia mihevitra fa manao sivana ianao. Azonao atao ihany koa ny manova rano 20-30% indray mandeha isaky ny 2-3 herinandro, fa ny fanovana rano kely kokoa dia tsara kokoa ho an'ny toetry ny rano marin-toerana!18 Apr 2021.
Ny trondro Betta Natural Habitat dia miaina anaty rano mandeha miadana toy ny heniheny, renirano kely na tanimbary mihitsy aza. Matetika ny Bettas dia miaina ao amin'ny tontolo antsoina hoe rano mainty izay misy loko volontany ny rano. Ny tannins dia mandoko ny rano volontsôkôlà mainty, toy ny rehefa manisy rano mafana ao anaty kitapo dite.
Ny mpiompy trondro dia afaka manao ny rano amin'ny paompy ho azo antoka ho an'ny trondrony amin'ny fikarakarana azy mialoha amin'ny ranom-boankazo misy rano, azo alaina amin'ny fivarotana akquarium na fivarotana biby fiompy. Misafidiana vokatra toy ny StressCoat (vita amin'ny API) izay manafoana avy hatrany ny chlorine sy ny chloramine ary mamehy ny metaly mavesatra.
Paompy rano. Ny rano ampiasain'ny ankamaroan'ny mpiompy trondro dia mivoaka avy hatrany amin'ny fauceto! Na izany aza, tsy tokony hampiasa rano amin'ny paompy ao amin'ny fitoeran-trondro ianao raha tsy manadio ny rano aloha.
Raha mbola tsy tafahoatra loatra ny tanko, dia azo antoka tsara ho an'ny bettas ny sira aquarium. Na dia mampiasa sira akquarium aza ny olona sasany mba hitsaboana aretina malemy, ny hafa kosa manampy izany ao anaty tanky ho fisorohana amin'ny ankapobeny. Na izany aza, zava-dehibe ny mitadidy fa ny bettas dia tsy mila sira aquarium.
Ny rano voadio dia azo sotroina. Saingy mety ho hitanao fa fisaka na manjavozavo izany. Izany dia satria nesorina ireo mineraly manan-danja toy ny calcium, sodium, ary manezioma izay manome ny rano paompy ny tsirony mahazatra azy. Ny sisa tavela dia hidrogen sy oxygen fotsiny fa tsy misy hafa.
Mila sivana ve ny trondro Betta? Ny tsy fampiasana sivana dia mitaky fanoloran-tena sy asa be. Ny fampiasana sivana dia tsara kokoa ho an'ny Betta anao. Raha misafidy ny tsy hampiasa sivana ianao rehefa mitazona Betta dia fanoloran-tena lehibe satria mila manova rano betsaka kokoa isan-kerinandro ianao mba tsy ho poizina ny rano.
Ahoana ny fampidinana ny pH amin'ny akquarium: Mampiasà osmosis mivadika (RO) na rano deionized (DI) mba hamoronana ny pH irina ary hanome buffering. Omano foana ny rano ary andramo ny pH alohan'ny hampidirana azy amin'ny aquarium. Haingo ny akquarium amin'ny hazo voajanahary. Manampia peat moss na peat pellets amin'ny sivanao.
Ny pH dia tokony ho eo anelanelan'ny 6.5 sy 8. Tokony hovana matetika ny rano, fara fahakeliny, indray mandeha isan-kerinandro, mba hahazoana antoka fa misy rano madio ny trondro. Jereo eto ny fomba famahanana trondro betta anao.
Valiny haingana: Mety ho an'ny trondro ve ny rano voadio
Valiny haingana: Afaka mivelona amin'ny rano voadio ve ny trondro Betta
Fanontaniana: Tsara ho an'ny trondro Betta ve ny rano voadio
Azonao atao ve ny mampiasa rano voadio ho an'ny trondro Betta
Azoko atao ve ny mampiasa rano voadio ho an'ny trondro Betta
Valiny haingana: Mampiasa rano voadio ve ianao amin'ny trondro Betta
Valiny haingana: Azonao atao ve ny mampiasa rano voadio ho an'ny trondro Betta
Azoko atao ve ny mametraka ny trondro Betta ao anaty rano voadio
Azonao atao ve ny mampiasa rano voadio ho an'ny trondro Betta Fish
Fanontaniana: Azoko atao ve ny mampiasa rano voadio ho an'ny trondro Betta
Valiny haingana: Ohatrinona ny Ph tokony ho ao anaty rano ho an'ny trondro Betta
Previous Post: Fanontaniana: Manao ahoana ny hafanana ilain'ny rano trondro Betta